आमाहरू आज एबी इन्टरनेटको एक वेबसाइट हो र हामी यसलाई ठूलो स्नेहका साथ अगाडि बढाउछौं, आमाबुबा, किशोरकिशोरी, शिक्षा, बाल मनोविज्ञान, बाल स्वास्थ्य, शिल्प, बच्चाहरूका लागि व्यञ्जनहरू, शैक्षिक दिशानिर्देशहरू, अभिभावकहरूको लागि सुझावहरू, शिक्षकहरूको लागि सुझावहरू ... अन्ततः हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारीको विश्लेषण गर्न समर्पित छौं जुन कुनै पनि अभिभावक, वा जसको बच्चाहरू वा किशोर-किशोरीहरू छन् उनीहरूको हेरचाहमा, यसले तपाईंलाई चासो लाग्न सक्छ। हामी परिवार, भावनाहरू, विद्यालय, जिज्ञासा र अधिकको बारेमा कुरा पनि गर्छौं।
लेखन टोली एक व्यक्ति वा अन्य तरिकामा शिक्षा र मातृत्वको संसारमा जोडिएको छ जो मान्छे मिलेर बनेको छ। तपाईको बच्चाहरूलाई हुर्काउने बारे तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउनमा माहिर। हामीले प्रस्ताव गरेको सामग्री उच्च गुणवत्ताको छ ताकि तपाईंसँग तपाईंको डिस्पोजलमा सबै भन्दा राम्रो जानकारी छ। यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि हामी तपाईंलाई के कुरा गर्न सक्दछौं भने, हाम्रो पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् सेक्सनहरू!
El Madres Hoy को सम्पादकीय टीम यो निम्न सम्पादकहरु मिलेर बनेको छ।
यदि तपाईं पनि आज मादर्सको लेखन टीमको भाग हुन चाहानुहुन्छ भने, यो फारम भर्नुहोस्.
प्यारेन्टिंग एक रमाईलो संसार हो, चुनौतिहरूले भरिएको जुन कहिलेकाँही अत्यधिक ठूलो हुन सक्छ। बच्चाहरूप्रतिको प्रेम असीमित हुन्छ, तर दैनिक दिनको समस्याहरूको समाधान गर्न यो पर्याप्त हुँदैन। यसलाई आफ्नै छालामा पत्ता लगाउँदा मलाई मातृत्व र आदरभाविक प्यारेन्टि .को बारेमा थप अनुसन्धान गर्न मद्दत पुर्‍यायो। मेरो शिक्षा साझेदारी गर्ने, मेरो लेखनको लागि जोशमा थपिएको, मेरो जीवनको मार्ग भएको छ। म Toñy हुँ र म तपाईंसँगै मायालु भनिने रोमाञ्चक संसारमा छु। ।
म एलिसिया हुँ, मेरो मातृत्व र कुकिंगको बारेमा धेरै जोशिला। मलाई बच्चाहरूको कुरा सुन्न र उनीहरूको सबै विकासको आनन्द लिन मन पर्छ, त्यसैले उनीहरूको बारेमा उत्सुकताले मलाई आमाको रूपमा दिइने सल्लाहहरू लेख्ने क्षमता दिएको छ।
मारिया जोस अल्मिरोन
मेरो नाम मारिया होसे हो, म अर्जेन्टिनामा बस्छु, र मसँग कम्युनिकेशनमा डिग्री छ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई बच्चाकी आमा जसले मेरो जीवनलाई रंगीन बनाउँछिन्। मैले बच्चाहरूलाई सँधै मनपराएको छु र त्यसैले म एक शिक्षक पनि हुँ त्यसैले यो बच्चाहरूको साथ हुनु मेरो लागि सजिलो र रमाईलो छ। मलाई प्रसारण गर्न, सिकाउन, सिक्न र सुन्न मन पर्छ। विशेष गरी जब यो बच्चाहरूको लागि आउँदछ। अवश्य पनि, यो जस्तो लेख्नु यो हो कि म यहाँ मेरो कलम थप गर्दैछु जो कोही मलाई पढ्न चाहान्छन्।
अंग्रेजी फिलोलजी मा डिग्री, भाषाहरु को प्रेमी, राम्रो संगीत र एक शिक्षक को रूप मा एक पेशा सधैं। यद्यपि यो पेशे सामग्री लेखनको साथ र विशेष गरी मातृत्वको साथ जोडीएको छ। एक संसार जुन हामी सिक्छौं, महसुस गर्छौं र हाम्रो बच्चाहरूसँगै प्रत्येक दिन पत्ता लगाउँदछौं, यहाँ विभाजित हुने छ।
फार्मासिस्ट बार्सिलोना विश्वविद्यालय (UB) बाट 2009 मा स्नातक गरे। त्यसबेलादेखि मैले प्राकृतिक बोटबिरुवा र परम्परागत रसायनको फाइदा उठाउन आफ्नो क्यारियरलाई केन्द्रित गरेको छु। म बालबालिका, जनावर र प्रकृतिको प्रेमी हुँ। मेरो लक्ष्य भनेको सबैलाई मद्दत गर्नु हो जसलाई यसको आवश्यकता छ, प्रतिकूल प्रभावहरू कम गर्दै, कल्याण बढाउने र हाम्रो प्यारो ग्रहलाई मनमा राख्दै। मैले फार्मेसी छोड्दा मसँग नि:शुल्क हुने घण्टाहरू म परिवारलाई, अध्ययन गर्न, पढ्न र लेख्न समर्पित गर्छु। म पनि जनावरको आश्रयको हिस्सा हुँ, जसले मलाई प्रेम र आनन्दले भर्छ। छोटकरीमा, सिक्ने र मद्दतले मलाई यो जीवनमा उत्प्रेरित गर्छ र म सधैं मेरो दैनिक जीवनमा यी "दुई रेसिपीहरू" राख्ने प्रयास गर्छु। यसका लागि यो सुन्नु आवश्यक छ, त्यसैले म तपाईंलाई सोध्न आग्रह गर्दछु, कुनै शंकाको साथ छोड्नु हुँदैन। तपाईलाई मेरो सल्लाह दिन र तपाईले भन्नु भएको कुरा सुन्न सक्षम हुन पाउँदा म खुसी छु।
नमस्कार! मलाई लेख्न मन पर्छ र म भावुक छु, पेशा र प्रशिक्षणबाट, रचनात्मकता र शिक्षणको, दुई पक्षहरू जसमा आमाले चौकीदार गर्न सिक्छ र आफ्ना बच्चाहरूको लागि साँचो विशेषज्ञ बन्छ।
आमा, चिकित्सकीय पेडेगोग, साइकोपेडोगोग र लेखन र सञ्चारको बारेमा भावुक। मेरा बच्चाहरूले मलाई राम्रो व्यक्ति बन्न र संसारलाई बिभिन्न तरीकाले हेर्न सिकाउँदछन्, उनीहरूलाई धन्यबाद दिनुहोस् म निरन्तर सिक्दै छु ... मातृत्वले मेरो जीवन परिवर्तन गर्यो, सायद धेरै थाकिएको छ तर सधैं आनन्दित।
नमस्कार, म प्राय कुनै पनि विषयको बारेमा लेख्छु किनकि म अन्यथा गर्न सक्दिन। विचार, मूल्य र जानकारीको प्रसार मेरो लागि आधारभूत देखिन्छ। विशेष गरी शिक्षाको विषय, विनियमित वा छैन, र बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा प्रशिक्षण मेरोलागि धेरै रोचक देखिन्छ।
मनोवैज्ञानिक भावनात्मक खुफिया र व्यक्तिगत विकासको बारेमा भावुक। म सम्भव भएसम्म गर्न मनपराउँदछ ताकि बच्चाहरू र उनीहरूका अभिभावकहरू राम्रो हो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा: खुशी हुनुहोस्, किनकि संयुक्त परिवारलाई देखेर भन्दा सुन्दर अरू केहि छैन।
म दुई उत्कृष्ट बच्चाहरूको बुबा हुँ र मलाई शैक्षिक शिक्षा र शिक्षा दुवै सम्बन्धित सबै मन पर्छ। मादर्स टुडेमा लेख्न सक्षम हुनुले मलाई वर्षौंको दौडान मैले सिकेका सबै कुरामा सफल हुन मद्दत पुर्‍याउँछ किनभने उहाँ एक सुन्दर परिवारको बुबा र पति हुनुहुन्छ।
१ and वर्ष पहिले मैले मेरो महान् शिक्षकलाई भेटें, दुई वर्ष पछि उसको नाम (सोफिया) सम्म बाँच्ने एक व्यक्ति संसारमा आए; तिनीहरू मेरो सपनाको बच्चाहरू जस्तो देखिदैनन् किनकि उनीहरू धेरै राम्रो छन् ... म तपाईंलाई आफूले सिकिरहेको कुराको बारेमा कुरा गर्न चिन्तित छु ... र तपाईं मलाई भन्नुहोस्।
एना एम। लोंगो
मेरो जन्म १ 1984। XNUMX मा बन्न (जर्मनी) मा भएको थियो र म गालिसियन र आप्रवासी आमा बुबाको छोरी हुँ। बच्चाहरू सँधै आएका छन् र मेरो जीवनको सन्दर्भ हुन्; वास्तवमा मैले शिक्षाको स्नातक अध्ययन गरेको कारण मलाई थाहा थियो कि कलिलो उमेरदेखि नै मेरो काम उनीहरूसँग सम्बन्धित छ र म कहिलेकाँही बच्चा हेरचाहकर्ता र निजी शिक्षक पनि छु। म के गर्छु मनपर्दछ, र म आशा गर्दछु जुन मेरो लेखहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
म दुई बच्चाहरूको आमा हुँ जससँग म दिनदिन सिक्छु र बढ्छु। आमा बन्नुका साथै जुन "शीर्षक" हो जसमा म अत्यन्त गर्व गर्दछु, मसँग जीवविज्ञानमा बीए छ, पोषण र डायटेटिक टेक्निशियन र एक डोला। मलाई मातृत्व र अभिभावकीय सम्बन्धी सबै कुरा अध्ययन गर्न र अनुसन्धान गर्न मन पर्छ। हाल म फार्मसीमा मेरो कामलाई पाठ्यक्रम र कार्यशालाहरूमा समाहित गर्दछु जुन म मातृत्वसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा सिकाउँछु।
म एक सुँडेकी आमा हुँ, र म केहि समयदेखि ब्लग लेख्दै छु। म मातृत्व, पालनपोषण र महिलाको व्यक्तिगत बृद्धिसँग सम्बन्धित सबै कुरामा चिन्तित छु। राम्ररी जानकारी दिएर मात्र हामी निर्णय गर्न सक्दछौं कि हाम्रो र हाम्रो परिवारको लागि के उत्तम छ।
मारिया Madroñal प्लेसहोल्डर छवि
एक प्रेरणादायक प्रकाश, भविष्यको पेडेगोग, प्राविधिक रूपले डेकोरेटर, छायामा शाश्वत लेखक, शिल्पकार, गायक र रचनाकार, सबैकुराको सिकारु, कुनै पनि कुराको शिक्षकको आमा। शिक्षा, संगीत र सामान्य जीवनको साथ प्रेममा। चरमपन्थीमा सकारात्मक, सबै चीजको राम्रो पक्ष छ र यदि यो गर्दैन भने, म यसलाई सिर्जना गर्ने जिम्मामा हुनेछु। मेरो सानो एक अर्को, सबै धेरै सरल छ।
म एक मनोवैज्ञानिक र लेखक हुँ, मेरो भावनाहरू लेखिरहेछन् र बच्चाहरू। म उनीहरूलाई उनीहरूको आधारभूत सीप वृद्धि गर्न, यस जटिल संसारमा एकीकृत गर्न मद्दत गर्दछ ता कि तिनीहरू खुशी र स्वतन्त्र हुन सिक्छन्। उनीहरूसँग कार्य गर्नु एक अद्भुत साहसिक कार्य हो जुन कहिले समाप्त हुँदैन।
मेरो नाम एले हो र म शुरुआती बचपन शिक्षाकर्ता हुँ। म अहिलेसम्म आमा होइन, यद्यपि भविष्यमा म पनि एक बन्न चाहन्छु किनकि म बच्चाहरूलाई माया गर्दछु। म खाना पकाउने, शिल्प र चित्र को दुनिया मा पनि भावुक छु, त्यसैले म विश्वस्त छु कि म तपाइँको बच्चाहरु को शिक्षा मा एक धेरै मद्दत गर्न सक्छ।
अभ्यासमा आमा, समयमा YouTuber र सुपरियर प्रयोगशाला टेक्नीशियन। मैले जवान आमा हुने मेरो सपना पूरा गरें, हरेक दिन एक नयाँ साहसिक कार्य हो, र मैले यसलाई केहि पनि बदल्दिन! म हाम्रा साना बच्चाहरूको पालनपोषण सम्बन्धी सबै हालका मुद्दाहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु र मैले सिकेको कुरा तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। म दृढ विश्वास गर्दछु कि आजका बच्चाहरूले हाम्रो पृथ्वीको भविष्य परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
किशोरावस्थामा केटोको गर्व आमा। जीवन र प्रकृतिको प्रेममा। मेरो बचपन देखि साहित्य, फोटोग्राफी र नृत्य को प्रेमी। प्रकृतिबाट र आफैंको अनगिन्ती प्रोजेक्टहरूसँग आत्म-सिकाइएको जुनसँगै मैले जगाउने सपना देख्दछु। बाल मनोविज्ञानमा विशेषज्ञ, मेरो पेशा मेरो उत्कटता हो। म सँधै आविष्कार र तिनीहरूको रचनात्मक सम्भावनाको लागि बच्चाहरूको जिज्ञासा देखेर छक्क परें।
नमस्कार! म एक समाजशास्त्री हुँ र बच्चाहरूको बारेमा भावुक छु। म खेलौनाहरू बारे भिडियो बनाउँछु जुन साना सानालाई सबैभन्दा मन पर्छ। उनीहरूको लागि मनोरञ्जनात्मक हुनुका साथै, उनीहरू ज्ञान प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन् जसले उनीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक र समाजीकरण प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ, उनीहरूको परिवार र वातावरणसँग स्वस्थ र आनन्दित तरीकामा सम्बन्ध राख्न।
शिक्षाको लागि मेरो उत्कटताले मलाई प्रारम्भिक बचपन शिक्षा पढ्न र त्यसपछि प्याडगोगी क्यारियरको लागि नेतृत्व गर्‍यो। र मेरो जिज्ञासा (सशंकित सीमाहरूको लागि), मलाई भावनात्मक शिक्षा, सकारात्मक अनुशासन र आदरपूर्ण अभिभावकीयता सम्बन्धी विषयहरूमा छानबिन गर्न नेतृत्व गर्‍यो।
म जिज्ञासु, चंचल र गैर कन्फर्मिस्ट हुँ, जसले मलाई वरिपरिको संसारलाई निरन्तर प्रश्न गर्न लगाउँछ, विशेष गरी मातृत्व र अभिभावकसँग सम्बन्धित के हो, जहाँ यति मिथक र गलत विश्वास बास गर्छ। म मूलमा पुग्न चाहन्छु, कारणमा र त्यहाँबाट कार्य गर्न। म स्तनपान र बच्चाहरूको स्वास्थ्यको रोकथाम र पदोन्नतिमा प्रशिक्षित छु।
म सानो भएको हुनाले मलाई सानालाई सिकाउने र उनीहरूसँग खेल्ने अभिलाषा छ। त्यसैले म आशा गर्दछु कि मेरो लेखहरू मार्फत म तपाईंलाई पारिवारिक गतिविधिका सबै फाइदाहरू देखाउन सक्छु।